अपराध अनुसन्धानबारे प्रधानमन्त्री र आइजीपीले के भने ? अपराध अनुसन्धानबारे प्रधानमन्त्री र आइजीपीले के भने ?
अपराध अनुसन्धानबारे प्रधानमन्त्री र आइजीपीले के भने ?
२५ असोज, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा विहीबार बिहानै ६३ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा लगायतको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख अतिथिका तर्फबाट मन्तव्य राखे । त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले धन्यवाद मन्तव्य राखे । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भने प्रहरी दिवसमा औपचारिक सम्वोधन गरेनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षा स्थापनामा खेलिरहेको भूमिकाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । २०१२ सालमा मुक्ति सेनाबाट नेपाल प्रहरी जन्मिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकसँग प्रहरीको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्ने बताए ।
आफ्नो कर्तव्यको सिलसिलामा ज्याउन गुमाउने प्रहरीहरुमाथि प्रधानमन्त्रीले श्रद्धासुमन व्यक्त गरे ।
नेपाल प्रहरीको लाइन मिनिष्ट्रीको हिसाबमा गृहमन्त्रीले पनि सम्वोधन गर्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर, मन्त्री थापाले कार्यक्रमलाई औपचारिक सम्वोधन गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओली सम्वोधनलगत्तै बाहिरिए भने गृहमन्त्री चाहिँ दिवाभोजमा समेत सामेल भए ।
आइजीपीको ‘कडा’ सम्वोधन
कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले कुनै पनि अपराधको अनुसन्धान गर्ने एकमात्र विज्ञहरुको समूह नेपाल प्रहरी नै भएको बताए । अपराधको अनुसन्धानमा कति समय लाग्छ भने तोक्न नसकिने आइजीपी खनालले बताए ।
तर, प्रहरी एक्लैले मात्रै समाजमा अपराध निर्मूल पार्न नसक्ने भन्दै आइजीपी खनालले यसमा स्थानीय जनता एवं नागरिकहरुको समेत सहयोग चाहिने स्पष्ट पारे ।
विगतका सम्वोधनहरुमा सरकारप्रति निकै नरमरुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका खनालले बुधबारको सम्वोधनमा प्रहरी संगठनभित्रका केही समस्याहरु पनि मन्त्रीलाई सुनाए । ‘माननीय मन्त्रीज्यू’ भन्दै आइजीपी खनालले हिमाली भेगमा जाडो सुरु हुँदाखेरि पनि विना ब्यारेक प्रहरी जवानहरुले चिसोमा ड्युटी गरिरहेको बताए ।
अब एसएमएसबाटै शेयर बजारको जानकारी लिन सकीने
त्यो पर्दैन भन्दै लिएको सपथविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा
भारतमा संक्रमण घट्यो
टाउटे चक्रवातको नेपालमा पनि असर देखीन सक्ने
विभिन्न मुलुकबाट धमाधम अक्सिजन सिलिण्डर नेपाल आउंदै
देशभर १ लाख ११ हजार अक्सिजन सिलिन्डर